Ubuntu 21.04 buya kuphelisa inkxaso ngomso. Hlaziya xa unako | ubunlog
Ubuntu 21.04 buya kuphelisa inkxaso ngomso. Hlaziya ngokukhawuleza
Ngexesha elidlulileyo ndafunda uluvo endingakhumbuli ukuba luvela phi okanye luvela kubani ukuba iCanonical kuya kufuneka ikhuphe iinguqulelo zeLTS kuphela. Kukwabo apho yonke into iphuculwe ngakumbi, kwaye kwezinye iindawo apho iindaba zamva nje zongezwa kwaye apho kunokubakho iingxaki ezincinci. Andicingi ukuba kuya kwenzeka, kwaye siya kuqhubeka sinoguqulelo olutsha rhoqo emva kweenyanga ezintandathu, ezintathu zazo zixhaswa kwiinyanga ezili-9 kwaye enye yonke iminyaka emibini ixhaswa iminyaka emi-5. Ubuntu 21.04 yakhutshwa ngo-Epreli ka-2021, kwaye ukuba uyayisebenzisa kufuneka wazi ukuba inobomi obuncinane obusele.
I-Codenamed Hirsute Hippo, Ubuntu 21.04 yazisa izinto ezintsha, kodwa iCanonical yagqiba kwelokuba ibambelele kwi-GNOME 3.38 kuba babecinga ukuba izinto bezingekakulungeli ukuqhuba kakuhle kwenkqubo yabo yokusebenza. I isiphelo somjikelo wobomi bayo siya kufika ngomso, nge-20 kaJanuwari, ke, kwabo bangazange benze njalo, ngoku lixesha elifanelekileyo lokuhlaziya inkqubo yokusebenza. Kweyiphi inguqulelo? Ewe impendulo ilula.
Ubuntu 21.04 buya "kufa" nge-20 kaJanuwari
Xa sisebenzisa iinguqulelo ze-LTS kubanzima kakhulu ukwenza isigqibo sokuba yeyiphi na inguqulelo onokuyiphucula. Oko kukuthi, ukuba sikuFocal Fossa, sinokuqhubeka siyisebenzisa kude kube ngu-2022, 2024 okanye 2025, okanye sithathe isigqibo sokuhlaziya kuguqulelo lwamva nje lwe-Ubuntu. Kubasebenzisi beHirsute Hippo kukho inketho enye kuphela: ukufumana kwi-Impish Indri eyasungulwa ngo-Oktobha odlulileyo. Ngaba kuya kwenzeka ukuqhubeka usebenzisa inkqubo yokusebenza emva kwe-20? Ewe, ngokuqinisekileyo, inkqubo yokusebenza iya kuqhubeka isebenza ngokufanayo, kodwa ayiyi kuphinda ifumane inkxaso kunye nohlaziyo. Oku akuthethi nje ukuba izicelo azisayi kufumana misebenzi mitsha, kodwa kwakhona iziphene zokhuseleko aziyi kugqunywa, ngoko sinokuvezwa kwizisongelo.
Ukuhlaziya kufuneka senze oku kulandelayo:
Senza ukhuphelo lweefayile ezibalulekileyo.
Sivula i-terminal kwaye siqiniseke ukuba akukho zixhobo zokuhlaziya ngalo myalelo:
Sifaka uhlaziyo-umphathi ukuba akakafakwa:
Siqala kwakhona inkqubo yokusebenza.
Nje ukuba sibuyele ngaphakathi, sivula i-terminal kwaye sibhale lo myalelo:
Samkela umyalezo ovelayo.
Ekugqibeleni, silandela imiyalelo evela kwisikrini. Xa siqala kwakhona sizakungena kwi-Impish Indri.
Enye inketho kukukhuphela i ISO (apha leyo yolona guqulelo luphambili), yigcine kwi-pendrive eneenkqubo ezifana ne-Etcher okanye iVentoy kwaye, kwinkqubo yofakelo, khetha u-"Hlaziya". Nantoni na eyenziwayo, kufuneka yenziwe ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 21.04 buya kuphelisa inkxaso ngomso. Hlaziya ngokukhawuleza
Molo, ndikwi 20.04, ingaba oku kusaxhaswa?
I-20.04 yi-LTS kwaye iya kuxhaswa kude kube ngu-2025.
Inqanaba lam lomsebenzisi, aliniki ngaphezulu, enkosi.
I-Mumble 1.3.4, uhlaziyo lwale app yengxoxo yelizwi
I-VirtualBox 6.1.32 sele ikhutshwe kwaye ifika ixazulula iimpazamo ezili-18